वित्तीय विश्लेषण गर्न ‘एआईपीएन’ | गृहपृष्ठ
Home बजार वित्तीय विश्लेषण गर्न ‘एआईपीएन’
on: February 17, 2019 बजार
वित्तीय विश्लेषण गर्न ‘एआईपीएन’
काठमाडौं (अस) । सामाजिक हितका लागि लगानी तथा पूँजी बजारसम्बन्धी नैतिक व्यावसायिकता स्थापित गर्न र लगानीकर्तालाई सहज हुने वित्तीय विश्लेषण गर्न एशोसिएशन अफ इन्भेस्टमेन्ट प्रोफेशनल्स नेपाल (एआईपीएन) नामको कम्पनीले काम थालेको छ । एआईपीएनले शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक समारोहबीच औपचारिक शुरुआत गरेको हो ।
पूँजी बजारमा नैतिकता, व्यावसायिकता र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले चार्टर वित्तीय विश्लेषक (सीएफए)–चार्टर होल्डर संलग्न यो संस्था स्थापना भएको एआईपीएनका अध्यक्ष डा. मनोज शाहीले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले देशमा राजनीतिक स्थिरता आएसँगै लगानीको वातावरण बन्दै गएको बताए । यो संस्थाको स्थापनासँगै लगानी वृद्धि भई वित्तीय अवस्था क्रमशः सुधार हुने उनको अपेक्षा छ ।
यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले लगानीकर्तालाई आत्मविश्वासी बनाउन र लगानीको सुरक्षा गर्न चाहेको बताए । यस्तै, सीएफए इन्स्टिच्युट एशिया प्यासिफिकका निक पोलार्डले प्रोफेशनल इन्भेस्टमेन्टले पूँजी बजारको नैतिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
लगानी बोर्डले लगानीको वातावरण बनाउने र लगानीकर्ताले प्रतिफल खोज्ने भएकाले यस्तो संस्था जरुरी भएको लगानी बोर्डका सदस्य तथा मेगा बैंकका निर्देशक बालकृष्ण शिवाकोटीको भनाइ छ ।
उक्त संस्थाले सोही दिन राजधानीमा क्रियाशील चार्टर फाइनान्सियल एनालिस्ट (सीएफए)हरूको सम्मेलन पनि गरेको छ ।